မလေးရှားနိူင်ငံသားဆရာဝန်တစ်ဦး(ရက်နေ့ ကိုလိုနာဗိုင်းရပ်ပိုး ကူးဆက်မှုကြောင့်ကြောင့်သေဆုံးပြန်ပြီ - MATUPI TIMES OLTHANG
မလေးရှားနိူင်ငံတွင် အလျှင်အမှန်ပြန်ပွားကူးစက်လျက်ရှိသောရောဂါပိုးကြောင့် ယမန်နေ့တွင် ကူးစက်ခံနေရသူစုစုပေါင်း(၁၁၈၃)ယောက်ရှိပြီး သေဆုံးသူစုစုပေါင်း(၈)ယောက်ရှိနေပါသည်။သို့သော်ထိုရောဂါပြန့်ပွားမှုကိုမလေးရှားနိူင်ငံကျန်းမာရေးဌာနမှထိန်းချုပ်နိူင်မှုမရှိသေးသဖြင့် လူအများ စိုးရိမ် ကြောက်လန့်နေကြပါသည်။
ယနေ့(၂၂.၃. ၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်သေဆုံမှု့ အမှတ်(၉)လူနာအမှတ် (၈၉၀) အသက် (၄၈ )နှစ် မလေးနိုင်ငံသား အမျိုးသားမလေးရှား ကျန်းမာရေးဌာန၏ ဆရာဝန် ဝန်ထမ်း တစ်ဦး ဖြစ်သည် ယင်းသည် တူရကီ နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ဖူးပြီး (၁၇.၃. ၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိပြီး (၁၈ ရက်)နေ့တွင် အသက်ရှူကျပ်ခြင်း နှင့် (၁၉ ရက်)နေ့တွင် ကိုယ်ပေါ်တွင် အစက်များ ထွက်လာသည် ယနေ့(၂၂ .၃. ၂၀၂၀)ရက်နေ့ ယနေ့ (10.33Am) တွင် (COVID-19) ဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုးကူးစက်ရောဂါကြောင့်ကွယ်လွန်သွားကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ဌာနမှယနေ့(၂၂.၃. ၂၂)ရက်နေ့ နေ့လည်တွင် သတင်ထုတ်ပြန်ပါသည်။ဓာတ်ပုံ/သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး(KFFS)
မေလးရွားနိူင္ငံသားဆရာဝန္တစ္ဦး(ရက္ေန႕ ကိုလိုနာဗိုင္းရပ္ပိုး ကူးဆက္မႈေၾကာင့္ေၾကာင့္ေသဆုံးျပန္ၿပီမေလးရွားနိူင္ငံတြင္ အလွ်င္အမွန္ျပန္ပြားကူးစက္လ်က္ရွိေသာေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ယမန္ေန႕တြင္ ကူးစက္ခံေနရသူစုစုေပါင္း(၁၁၈၃)ေယာက္ရွိၿပီး ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း(၈)ေယာက္ရွိေနပါသည္။သို႔ေသာ္ထိုေရာဂါျပန့္ပြားမႈကိုမေလးရွားနိူင္ငံက်န္းမာေရးဌာနမွထိန္းခ်ဳပ္နိူင္မႈမရွိေသးသျဖင့္ လူအမ်ား စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန့္ေနၾကပါသည္။
ယေန႕(၂၂.၃. ၂၀၂၀)ရက္ေန႕တြင္ေသဆုံမႈ႕ အမွတ္(၉)လူနာအမွတ္ (၈၉၀) အသက္ (၄၈ )ႏွစ္ မေလးနိုင္ငံသား အမ်ိဳးသားမေလးရွား က်န္းမာေရးဌာန၏ ဆရာဝန္ ဝန္ထမ္း တစ္ဦး ျဖစ္သည္ ယင္းသည္ တူရကီ နိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီး (၁၇.၃. ၂၀၂၀) ရက္ေန႕တြင္ ေဆး႐ုံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး (၁၈ ရက္)ေန႕တြင္ အသက္ရႉက်ပ္ျခင္း ႏွင့္ (၁၉ ရက္)ေန႕တြင္ ကိုယ္ေပၚတြင္ အစက္မ်ား ထြက္လာသည္ ယေန႕(၂၂ .၃. ၂၀၂၀)ရက္ေန႕ ယေန႕ (10.33Am) တြင္ (COVID-19) ဗိုင္းရပ္ေရာဂါပိုးကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ဌာနမွယေန႕(၂၂.၃. ၂၂)ရက္ေန႕ ေန႕လည္တြင္ သတင္ထုတ္ျပန္ပါသည္။ဓာတ္ပုံ/သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး(KFFS)
Be the first to comment on "မလေးရှားနိူင်ငံသားဆရာဝန်တစ်ဦး(ရက်နေ့ ကိုလိုနာဗိုင်းရပ်ပိုး ကူးဆက်မှုကြောင့်ကြောင့်သေဆုံးပြန်ပြီ"